समृद्धिका लागि 'हनुमान' होइन ! कुलमानहरू रोजौँ - Ratopati
समृद्धिका लागि ‘हनुमान’ होइन ! कुलमानहरू रोजौँ
देशका जनतालाई नियमित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने अहम् जिम्मेवारी बोकेर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विगतका यिनै समयमा अति व्यस्त हुन्थ्यो तर विडम्बना त्यो व्यस्तता जनतालाई राहत दिनमा होइन कि हप्ता–हप्तामा लोडसेडिङका तालिका प्रकाशित गरेर आम जनमानसलाई आहत दिनमा थियो ।
लाग्थ्यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम विद्युत् सेवा आपूर्ति गर्ने होइन कि जनतालाई लोडसेडिङका तालिका आपूर्ति गर्ने हो । जसबाट आम जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको थियो ।
देश शिथिलतामा फस्दै थियो, त्यसमाथि देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रहेको राजधानी काठमाडौँ उकुसमुकुसको अवस्थामा थियो तर प्राधिकरणले एक घण्टा भए पनि लोडसेडिङ कम गरेर आम जनताको पीडामा मलम लगाउन सकिन्छ कि भनेर कुनै अग्रसरता लिएन, कुनै जिम्मेवारी नै बोध गरेन । त्यहाँको नेतृत्वले अलिकति मात्र भए पनि जनताको संवेदनशीलता बोध गरेको भए लोडसेडिङ केही हदसम्म कम गर्न सम्भव थियो तर त्यो भएन । कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्थ्यो ऊ आफूलाई लोडसेडिङ प्राधिकरणको रूपमा स्थापित गर्देछ तर आज एकाएक परिस्थितिमा चामत्कारिक ढङ्गले परिवर्तन भएको छ ।
त्यही विद्युत् प्राधिकरण, अझ हिजोकोभन्दा बढी माग, हिजोकोभन्दा कम उत्पादन र त्यही संरचनाबाट नै आज काठमाडौँ लगायत आठ वटा जिल्लामा लोडसेडिङ हटेको छ र अन्य जिल्लामा पनि विगतभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । यस्तो चामत्कारिक नतिजाको कारण एक मात्र छ कि विद्युत् प्राधिकरणको कमाण्ड एक कुशल अनि इमानदार व्यवस्थापक कुलमान घिसिङको हातमा जानु । कुलमान आएको केही दिनमै उनले काठमाडौँलाई लोडसेडिङमुक्त बनाए । देशमा लोडसेडिङ हट्न तत्काल सम्भावनै छैन भनेर भनिरहँदा कुलमानले गरेको कार्यलाई चामत्कारिक रूपमा हेरिएको छ ।
देशका नेतृत्वको गति र विद्युत् प्राधिकरणको कार्यशैली हेर्दा जनताले लोडसेडिङ तत्काल अन्त्य हुनेमा कुनै विश्वास नै गरेका थिएनन् तर कुलमानले विश्वास गर्न बाध्य बनाइदिए, आज राजधानी चम्किलो छ । यस्तो असम्भव कुरालाई कुलमानले छोटो समयमै कसरी सम्भव बनाए त ? यो अहिले धेरै तिर चर्चा हुने गरेको विषय हो । आज देश उज्यालो हुनुमा कुलमानको जादुको चमत्कार भने पक्कै होइन, यो केवल हो त कुलमानको व्यवस्थापकीय क्षमताको चमत्कार । निकै कुशल, इमानदार अनि जिम्मेवार व्यवस्थापकको रूपमा पहिचान बनाएका घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको आपूर्ति प्रणाली र माग व्यवस्थापनमा रहेका व्यापक कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दे धेरैले असम्भव देखेको कामलाई सम्भव सावित गरिदिएका छन् । यसबाट आज हरेक तर्फबाट निरासामा रहेका जनतालाई केही राहत महसुस भएको छ ।
यहाँ विगतमा एकैचोटी लोडसेडिङको अन्त्य गरेर देश चम्काउनै पथ्र्यो भन्न खोजिएको होइन तर जबर्जस्त सवाल यो हो कि अपार जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको देशका नागरिक लामो समयदेखि अँध्यारोमा अलमलिरहँदा विद्युत् आपूर्तिको जिम्मा लिएको प्राधिकरण किन चुप लागेर बस्यो ? के आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि एउटा ४०० मेगावाटको प्रोजेक्ट दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन सकिँदैनथ्यो ।
विद्युत् उत्पादन बढाउन आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु त कता हो कता उल्टै लाजै नमानी दिनका दिन लोडसेडिङका तालिका थोपर्ने शैलीलाई नितान्तै गैरजिम्मेर मान्नुपर्छ । कमसेकम एउटा प्लानिङअनुसार जनतालाई आस्वस्थ पारेको भए पनि जनताको पीडा कम हुने थियो । यसअघि प्राधिकरणमा जाने हाकिमहरूको काम विद्युत् विकासका योजना सुनाउनभन्दा दिनको यति घण्टा र उति घण्टा भन्दै लोडसेडिङका योजना सुनाउन बढी थियो । कुनै राजनीतिक दलको टीका थापेर गएका प्रमुखहरूको ध्यान विद्युत् विकासभन्दा पनि राजनीतिक हालीमुहाली र कर्मचारी सरुवा बढुवामै केन्द्रित भयो । त्यसैले त वर्षौंसम्म आम नेपाली जनताले ऊर्जा सङ्कट भोग्नुपर्यो । यसबाट भएको आर्थिक हानी, महँगी र विकासका अवरोधहरूको त कुरै छाडौँ ।
काठमाडौँ लगायतका सहरलाई लोडसेडिङमुक्त गराउन कुलमानले गरेको प्रयासबाट केही सकारात्मक सन्देश गएको छ कि थोरै मात्र भए पनि इच्छा शक्ति र देशप्रति इमानदार भएमा जनतालाई राहत हुन्छ भन्ने कुरामा । आज देशमा ऊर्जा सङ्कट भएको वर्षौं भयो तर न त जलविद्युत् आयोजनाले गति लिएका छन् न त यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्व समाल्नेहरूले कुनै खाका पेस गरे ।
आज कुलमानले उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि विगतकोभन्दा धेरै विद्युत् आपूर्ति गराई कुलेखानीको पानीलाई प्रयोग नगरी नै लोडसेडिङ अन्त्य गरेका छन् । उनले देशमा रहेको असमान वितरण प्रणालीलाई समाप्त गर्दै आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक वितरण प्रणाली अपनाएका छन् । विद्युत् चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने योजनामा छन् । जसबाट देश उज्यालो भएको छ । पहुँच र शक्तिको आडमा विद्युत् मागको पिक आवरमा नै ठुल्ठूला उद्योगलाई विद्युत् दिएर जनतालाई एउटा चिम बाल्न वञ्चित गराउने गरेको तथ्य कुलमानले प्रस्ट पारिदिएका छन् । एउटा कुशल विद्युत् नेतृत्वका कारण उद्योग कलकारखानादेखि सर्वसाधारण जनतासम्मलाई राहत हुनु सकारात्मक कदम हो ।
अब विद्युत् प्राधिकरणमा राजनीति बन्द हुनु जरुरी छ । विद्युत् प्राधिकरण यस्तो संस्था हो जसले देशको समृद्धिको एउटा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेको छ किनभने ऊर्जा देश समृद्धिको प्रमुख आधार हो । अब कुलमानको कार्यकालमा उनलाई सबै कर्मचारी अनि आम जनसमुदायले सहयोग र हौसला बढाउनु आवश्यक हुन्छ । कुलमानको कुशलतालाई देशले अझै चार वर्ष प्रयोग गर्न सक्यो भने हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने कुरामा दईमत छैन । कुलमान यस्ता पात्र हुन्, जसले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालाई देशकै सफल आयोजना बनाउन सफल भएका थिए । चिलिमे चम्काएका कुलमानलाई काम गर्ने वातावरण दिएमा देश चम्काउने कुरामा कुनै दुविधा लिनुपर्दैन । उनले देशमा विद्युत् उत्पादनको लागि चिलिमेकै मोडलमा अगाडि बढ्ने उद्घोष गरेका छन् । कम्पनी मोडल नै देशमा विद्युत् उत्पादन र विकासको उपयुक्त मोडल हो ।
आज सरकारले आह्वान मात्र गरोस् २०औँ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न पुग्ने आर्थिक स्रोत देशमै जुट्ने छ । हजारौँ जनता विद्युत्मा सेयर हाल्नका लागि तयार हुनेछन् । मात्र प्राधिकरणले वातावरण बनाओस् । यसको राम्रो ज्ञान कुलमानलाई छ । उनको क्षमतालाई देशले चिन्नु जरुरी छ । अब फोहरी राजनीतिले देश समृद्ध हुँदैन । अब देशका सबै क्षेत्रमा ‘राइट म्यान टु राइट प्लेस’ हुनैपर्छ, जस्तो प्राधिकरणमा कुलमान उपयुक्त पात्र छन्, त्यसरी नै अन्य निकायमा पनि विज्ञ व्यक्ति आउनु जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा कुशल, इमानदार र विज्ञ व्यक्ति आउने हो भने देश समृद्धि बन्न धेरै समय नै लाग्दैन ।
आज मलेसिया, सिङ्गापुर त्यहाँका एक–एक जना व्यक्तिकै योगदानमा आज समृद्धिको अवस्थामा छ । हामीकहाँ पनि देशमा रहेका यिनै कुशल पात्रहरूले देशलाई समृद्धि बनाउने तागत राख्छन् । मात्र यति हो कि तिनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण र हौसला आवश्यक छ । देश बनाउन चाहने अरू धेरै कुलमानलाई राज्यले उचित स्थान दिओस् । अब देशको बागडोर समाल्नेहरूलाई चेतना हुनु जरुरी छ कि तपाईंको पछि लाग्ने हनुमानले देश बनाउन सक्दैनन् । त्यसको लागि कुशल विज्ञ चाहिन्छ ।
सलाम कुलमान ! हामी तपाईंलाई सदैव साथ दिनेछौँ । हामी घिनलाग्दो राजनीतिको पोखरीमा पौडी खेल्ने युवा होइनौँ हामी समृद्धिको समुद्रमा पौडिन चाहाने युवा हौँ । तपाईंको देश उज्यालो पार्ने मिसनमा मिसमास पार्न खोज्नेसँग हिसाब–किताब गर्ने काम हामी युवाको हो । तपाईं खुट्टा नकमाइ अगाडि बढ्नुहोस् ।